Tag: aka ike d
Nke a abụghị nnukwu blog post n'ụwa… nooo… nke a bụ naanị Tribute. Egwuregwu niile, ewepụrụ m 3 post drafts n'ụtụtụ a. Ha bu ndi edeputara nke m malitere n’oge gara aga mana enweghi m ike ichota ha ka ha wee biputa. Ikekwe otu n'ime ha bụ ọkwa kasịnụ n'ụwa. Anyị agaghị ama. Otu bụ iji blọọgụ atụnyere ngbanwe akwụkwọ akụkọ. Nke abụọ dị na ya